रामप्रसाद सिटौला (फलित ज्योतिष), मंसिर २९, २०७४
मन पराउनेहरूबाट आएका प्रस्ताव स्वीकार गर्दा दुवैको कल्याण हुनेछ । तपाईंलाई प्रयोग गर्नेहरू भित्रभित्रै षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यात्राको समय तालिकमा फेरबदल हुँदा स्वास्थ्य बाधाले सताउन सक्छ । अवरोध निर्मूल पार्न अभिभावकको भूमिका प्रेरणादायक हुनेछ । रातिको यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला । पुरा पढ्नुहोस्
दिलीप रायमाझीको आजबाट गोरे
साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २९, २०७४
सामाजिक प्रेमकथात्मक चलचित्र ‘गोरे’ मा दिलीपले पहिलेझैं नाच्ने–नचाउने र हाँस्ने–हँसाउने भूमिका निर्वाह गरेका छन् । खलपात्रबाट पिडित दुई नायकले लिने बदला चलचित्र गोरेको मुख्य विषय हो । अनु शाह यो चलचित्रमा दिलीपकी जोडीका रूपमा देखा पर्नेछिन् । पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्पलगत्तै आपत्कालीन उद्धारका लागि जापान सरकारका तर्फबाट जेडीआर (जापान डिजास्टर रेस्क्यु) टोली नेपाल आएको थियो । टोलीले काठमाडौं उपत्यकादेखि विकट सिन्धुपाल्चोकसम्म पुगेर उद्धार कार्य सञ्चालन गर्‍यो । पुरा पढ्नुहोस्
अधिकारी रवीन्द्र, मंसिर २९, २०७४
समयसँगै धेरै राजनैतिक उथलपुथल भयो । त्यही क्रममा देशहरू सीमाबद्ध भए र संयोगवश सिद्धार्थ गौतम जन्मिएको भूमि नेपालमा पर्न गयो । यो एक विशुद्ध ‘लक’ को कुरा थियो, कसैले गौरव गर्नुपर्ने अवस्था होइन, किनभने जति सजिलै त्यो पवित्र भूमि नेपालमा पर्‍यो ठीक त्यसरी नै भारतमा पनि पर्न सक्थ्यो । पुरा पढ्नुहोस्
तपाईं बियरको सौकिन हुनुहुन्छ भने यो उत्सव तपाईंकै लागि हो । विश्वका ६० थरीका स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बियरको स्वाद प्रदान गर्न काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय बियर महोत्सवको आयोजना हुँदैछ । पुरा पढ्नुहोस्
धेरै पछि सुशील
चलचित्र सायद–२ को असफलतापछि गुमनामजस्तै भएका अभिनेता सुशील श्रेष्ठ बल्ल सार्वजनिक समारोहमा झुल्किन थालेका छन् । आफूले अभिनय गरेको चलचित्रले उत्कृष्ट व्यवसाय गर्न नसक्दा सुशीलले आफ्ना सम्पूर्ण सम्पर्क माध्यमहरू बन्द गरेर आफूलाई घरमै सीमित गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
१७ का उत्कृष्ट
राेयटर्स समाचार संस्थाले सन् २०१७ मा आफूले सम्प्रेषण गरेका तस्बिरहरूमध्येका केही उत्कृष्ट तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तस्बिरमा जनैपूर्णिमाका अवसरमा एक बालकले नुहाइरहेको दृश्यदेखि विश्वका महत्वपूर्ण घटनाहरू समावेश छन् । पुरा पढ्नुहोस्
संकलक : जीवन भट्टराई, मंसिर २९, २०७४
खडानन्द : एकदिन यो पृथ्वीमा महाप्रलय हुनेछ, पानी, हावा केही पनि रहने छैन, पृथ्वीमा रहेका सबै जीव नष्ट हुनेछन् ...बिर्खे : सर, त्यो दिन छुट्टी हुन्छ कि हुँदैन ? स्कुल आउनुपर्छ कि पर्दैन । पुरा पढ्नुहोस्
पुरुष र महिलाबीच स्वस्थ यौनसम्बन्ध हुँदाहुँदै​ पनि बाहिरी व्यक्तिसँग शारीरिक यौनसम्बन्ध हुने सम्भावना कति हुन्छ ? यदि स्वस्थ यौनसम्बन्धका बाबजुद पनि बाहिरी सम्बन्ध हुन्छ भने मनोविज्ञानका हिसाबले किन हुन्छ ? पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र प्रचारका लागि कलाकार तथा निर्माता निर्देशक निक्कै आक्रामक हुँदै गैरहेका बेला चलचित्र चाहिँ त्यति अपेक्षाकृत हुन नसकेको दर्शकहरुको गुनासो पनि बढ्दो छ । चलचित्र प्रचारकै लागि चलचित्रकर्मीहरुले कतिसम्म गर्छन भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो चलचित्र ‘रोमियो र मुना’ कार्यक्रम । पुरा पढ्नुहोस्